कसरी मशरूम कुखुरा मशरूम पकाउने, ताकि तिनीहरूबाट बर्तन स्वादिष्ट थिए
जंगल मशरूमबाट डिशहरू सधैं नागरिकोंका लागि उपलब्ध छैनन्। एक औद्योगिक स्तर मा, तिनीहरु बढ्दै हिसाब र महंगी छ। यसैले, पसलहरु को अलमारियों मा तपाईं अक्सर मशरूम र ओस्टर मशरूम देखि मिलन सकते हो। लोकतान्त्रिक मूल्यको बावजूद, पछि न त पक्षमा छन् न त उनीहरूको प्रख्यात भाइहरूलाई कमर स्वादमा। प्रोटीन र अमीनो एसिड ओइस्टर मशरूम सब्जिहरु जस्तै एकै तरिकामा धनी छन्, तर कार्बोहाइड्रेट र वसाको स्तर पनि ती भन्दा बढी हुन्छ। मशरूमले आहारमा मासुलाई राम्रो तरिकाले बदल्न सक्छ, किनकि तिनीहरूसँग पोषक तत्वहरूको एउटै सेट छ।
ओइस्टर मशरूम तंत्रिका तंत्र, वसा चयापचय को कार्यक्षमता मा सुधार। ऊर्जामा शर्कर परिवर्तन गर्दै, मांसपेशी ऊतकको निर्माणमा योगदान। यो भिटामिन पीपी को प्रभाव को एक अधूरो सूची हो। ओइस्टर मशरूम यसको सामग्री अनुसार चैंपियन छन्। थ्रोम्बोसिस, हृदय रोग र हाइपरटेन्सनले शरद ऋतुहरूमाथि नियमित रूपमा लिने व्यक्तिलाई धम्की दिदैन। सूपहरू, क्यासरोलहरू, मरिनाडेडहरू एक स्वस्थ आहार विविधीकरण गर्न सक्षम छन्।
ओइस्टर मशरूम, जो धेरै छिटो तयार छन्। यो हाम्रो उमेरको गतिमा महत्त्वपूर्ण छ। कसरी ओइस्टर मशरूम पकाउने ताकि तिनीहरूबाट बर्तन विविध र स्वादिष्ट हो? यो कार्यले राम्रो होसियार बनाउँछ। यहाँ केही व्यञ्जनहरू छन् जसले मशरूम पेटूको मेनु विविधतालाई मद्दत गर्नेछ।
यो नुस्खा राम्रो छ किनभने खाना पकाउने एक घण्टा पछि तपाईं डिशको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईलाई निम्न को आवश्यकता छ:
ओइस्टर मशरूम - 1 किग्रा।
चीनी -2चम्मचहरू।
सिरका -4चम्मचहरू।
काली मिर्च (मटर) - स्वाद।
बे पत्ता -2पीसी।
मशरूम कुल्ला, तिनीहरूलाई काट्नुहोस्। याद गर्नुहोस्: ओइस्टर मशरूम निविदा छ, त्यसैले यसलाई पनि पतले कुच्याउँदैन।
परूममा मशरूम राख्नुहोस्।
तिनीहरूलाई लगभग 20 मिनेटको लागि पकाउनुहोस्।
प्रक्रियामा, चीनी, नुन, कालो मिर्च जोड्नुहोस् ।
खाना पकाउने दुई मिनेटअघि मशरूम सिरकाको साथ बर्तनमा राख्नुहोस्। यो पहिले नगर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो भान्सामा बस साँस गर्न सक्नुहुन्न।
मिश्रीहरू एक गिलास डिशमा राख्नुहोस्।
तिनीहरू ठुलो भएपछि, तिनीहरूलाई सानो मात्रामा तेल लगाउनुहोस् र टेबलमा डिश सेवा गर्नुहोस्।
समुद्री किनारा एक नाश्ता को रूप मा राम्रो छ। कसरी ओइस्टर मशरूम पकाउने ताकि तिनीहरूले पोषणशील हो? तपाईं तिनीहरूलाई त्रसित गर्न सक्नुहुन्छ, आलु संग बाहिर राख्नुहोस्, जुलीन, सूप, तातो सलाद बनाउनुहोस्। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् कि सबैलाई सूचीबद्ध गर्न असम्भव छ!
खसी क्रीम र प्याजको साथ ओइस्टर मशरूम तयार गर्ने
तपाईंलाई यी अवयवहरूको आवश्यकता पर्दछ।
खट्टा क्रीम - 1 ग्लास।
सब्जी तेल - 50 मिलीलीटर।
कालो मिर्च मिर्च।
ओइस्टर मशरूम पकाउनु अघि, तिनीहरूलाई कुल्ला र तिनीहरूलाई काट्नुहोस्। पहिलो नुस्खाबाट सल्लाह सम्झनुहोस्? राम्ररी पोखरेल मशरूम काटेर - मशरूम बिछ्याउने हुन्छ, र त्यहाँ खानेकुरा पनि केहि हुँदैन। अर्को:
तेललाई फ्राइङ फ्राइङ प्यानमा राख्नुहोस्।
यसको लागि पर्खनुहोस्।
त्यो मशरूम बाहिर राखे पछि। फ्राइङको सुरुमा, तिनीहरूले रस अलग गर्नेछन्। यो धेरै हुनेछ, तर यो यसको लायक छैन।
जब रस उबलियो, थोपा र मक्खन थप गर्नुहोस् र प्याज प्यानमा प्याज डुबाउनुहोस्।
कम गर्मीमा फ्राइङ जारी राख्नुहोस्, कहिलेकाहीँ अँध्यारोमा।
प्याज सुनको रङ, नमक र मरिच मशरूम मरिच गर्दा, खट्टा क्रीम जोड्नुहोस्।
अर्को3मिनेटको लागि आगोबाट फ्र्रिङ प्यान हटाउनुहोस्। यस समयमा जलविद्युतलाई रोक्नको लागि मशरूम हल गर्नुहोस्।
ओइस्टर मशरूम को लागि मशरूम तैयार गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। तर यी व्यंजनहरू डिनरको लागि खाई नदिनुहोस् , चाहे तपाईं कुन छनौट गर्ने छनौट गर्नुहुन्छ। मशरूम व्यभिचार एक भारी र उच्च क्यालोरी खाना हुन्।
जर्जियामा हेलोफाइट कसरी तयार पार्छ
कसरी स्क्विड र फ्राइड स्क्विड पकाउने?
सर्दको लागि साउचरर: खाना पकाउने व्यंजनहरू
कर्मचारी को समाप्ति को अधिसूचना: पंजीकरण को नियमहरु। नियोक्ता को पहल मा कर्मचारी को खतरे
जसलाई उहाँले Pushkin गरेको परी कथा मा Balda competed? जवाफ लागि हामी देख रहे
पुरानो जिन्स रूपमा फेसनदार जीन्स बनाउन
Kurban Berdyev: एक खेलाडी र प्रशिक्षक को जीवनी
कुना वर्षा: चयन गर्न कसरी